Trump waa "canug, kalsoonina malahan" - BBC News Somali
Ninka qoray buugga muranka dhaliyay ee ku saabsan Aqalka Cad ee Trump uu ka arrimiyo ayaa sheegay in madaxweynaha "uu ka kalsooni yaryahay qofkasta oo dunida ku nool, sida dadka ay moodaanna uusan ahayn".
Michael Wolff, oo dhowr bilood ka shaqeynayay Aqalka Cad intii buugga uu qorayay, wuxuu ka jawaabayay sheegashada madaxweynaha oo ah in buugga ay ka "buuxaan waxyaabo been ah".
Qareennada madaxweyne Trump waxay isku dayeen in ay hor istaagaan daabacaadda buugga loogu magacdaray Fire and Fury "Dab iyo Carro": Wuxuuna ka hadlayaa xaaladda gudaha xafiiska Trump.
Mr Wolff wuxuu telefishinka NBC u sheegay in "dhammaan shaqaalaha Trump ay dhahaan 'wuxuu la mid yahay canug".
Wuxuu intaa ku daray: "Waxa ay taasi ula jeedaan in uu markasta u baahan yahay in la quudiyo. Wax kasta isaga ayey ku saabsan yihiin... Ninkan wax ma akhriyo, waxna ma dhageysto. Wuxuu la mid yahay kubad bannaanka uga baxday garoonka."
Buugga waxaa qeyb ka ah kaaliyihii Trump u qaabilsanaa istiraatiijiyadda, Steve Bannon, oo qeexay "kulan ka dhacay" dhismaha Trump Tower ee New York, oo u dhexeeyay saraakiishii ololihii Trump iyo wiilkiisa iyo sidoo kale Ruushka. Wuxuu shirkaasi ku tilmaamay "qiyaano qaran".
Mr Wolff wuxuu sheegay in "aysan caadi ahayn" in madaxweynaha Mareykanka uu isku deyay in uu joojiyo daabacaadda buuggiisa.
Xuquuqda Sawirka @TODAYshow @TODAYshow
Wuxuu sheegay in uu difaacayo sax ahaanta wax kasta ee uu qoray, ka dib markii Madaxweyne Trump iyo dad kale ay su'aal geliyeen xaqiiqada iyo sax ahaanshaha waxyaabaha uu ku qoray buugga iyo dadka uu wareystay.
Wolff wuxuu ku jawaabay: "Maxaan halkaas ka sameynayay haddii uusan rabin in aan xafiiskiisa joogo? Waan la hadlay madaxweynaha... ma ahayn mid qarsoodi ah."
Waxaa la weydiiyay isku dayga la doonayay in buugga lagu joojiyo, iyo magaca uu ka helay in ay caawiyeen in buugga la iibsado wuxuu yiri: Halkeen u diraa shukulaatada hadaba?"
Wuxuu sheegay Trump in Mr Bannon - oo shaqada laga tiray bishii August - uu "caqliga ka tagay" ka dib markii uu waayay xilkiisii Aqalka C